Yoweri Kaguta Museveni (wuxuu dhashay 15 Sebtember 1944) waa siyaasi u dhashay dalka Ugandha oo madaxweyne ka soo noqday wadanka Ugandha ilaa 1986. Museveni wuxuu ku lug lahaa kacdoonno lagu afgambiyay hogaamiyayaashii caanka ahaa ee reer Uganda Idi Amin (1971–79) iyo Milton Obote (1980–85) ka hor inta uusan qabsan xukunka wadanka. 1980-yadii.
Bartamihii- dabayaaqadii 1990-yadii, Museveni waxaa u dabaaldegay reer Galbeedka isagoo qayb ka ah jiil cusub oo hoggaamiyayaal Afrika ah. Muddadii uu madaxweynaha ka ahaa Museveni, Ugandha waxay la kulantay nabadgelyo sokeeye iyo guulo la taaban karo oo lagula dagaallamo HIV / AIDS. Isla waqtigaas, Ugandha waxay weli tahay waddan ay la silicayaan heerar sare oo musuqmaasuq, shaqo la'aan iyo saboolnimo.
Madaxweynenimada Museveni waxaa hareeyay ku lug lahaanshaha dagaalka sokeeye ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo khilaafaadka kale ee gobolka harooyinka waaweyn; kacdoonkii ka dhacay Waqooyiga Ugandha ee Lord's Resistance Army, oo sababay gurmad bina-aadamnimo; iyo cabudhinta mucaaradka siyaasadeed iyo wax ka beddelka dastuurka oo baabi'inaya xaddidaadaha muddada xilka madaxweynaha (2005) iyo xaddidaadda da'da madaxweynaha (2017), taas oo sahaleysa kordhinta xukunkiisa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoweri_Museveni&oldid=230698"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Febraayo 2022, marka ee eheed 10:05.